Amasondo e-Mac Pro azothengiswa njengezesekeli ezitolo. | Ngivela kwa-mac
Amasondo e-Mac Pro azothengiswa njengezesekeli ezitolo.
UManuel Alonso | | Mac Pro
Lapho i-Apple uthengise iMac Pro kwamiswa ukuthi isisekelo salo kwakuyizinyawo zensimbi. Kodwa-ke, uma ungomunye walabo abavame ukuhambisa ikhompyutha yakho, izinyawo kungenzeka zingabi yindlela engcono kakhulu. Inkampani yaseMelika yethule uhlelo lwamasondo ngentengo ephezulu impela.
Inkinga enkulu ukuthi bekufanele ukhethe uma ufuna izinyawo noma amasondo. Ngaphezu kwalokho, ukuwashintsha bekufanele uye esitolo se-Apple noma kumthengisi ogunyaziwe. Izinto kubukeka sengathi zizoshintsha.
Amasondo eMac Pro angashintshaniswa ngumsebenzisi uqobo
Uma uya kuwebhusayithi esemthethweni ye-Mac Pro ukuyilungiselela ngendlela oyifunayo, enye yezinketho ukufaka amasondo oxhaso. Intengo efanayo ihaba kancane, i-480 € futhi uma ukhetha, usala ngaphandle kwezinyawo zensimbi.
Kuze kube manje amasondo awakwazi ukuthengwa njengesesekeli futhi umsebenzisi uwabeka embhoshongweni wamakhompyutha. Kepha nge ukuvela kochungechunge lwemibhalo lapho imininingwane ye-Mac Pro ichazwe kabanzi, Kuthiwa maduzane, amasondo azoba isesekeli esisodwa.
Impumelelo eyenziwe yi-Apple, ngoba futhi yize noma besilokhu sigxeka ukungabi bikho kwamandla wokumisa ama-Apple computer, akufanele kwenzeke kumodeli yePro. kufanele sikwazi ukwengeza cishe noma yikuphi ukucaciswa ngumsebenzisi ngaphandle kokuya ngezitolo ezisemthethweni noma ezinikwe amandla.
Sicabanga ukuthi intengo yamasondo izofana nanamuhla. Ukudlula kwangempela, kepha ngiyazi kuvula inketho yezinkampani ezivela eceleni ukuthi zithengise amasondo ahambisanayo ngentengo yokuncintisana kakhulu. Yiqiniso, kufanele kukhunjulwe ukuthi amasondo awasekeli ngaphezu kwama-25 kg.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Pro » Amasondo e-Mac Pro azothengiswa njengezesekeli ezitolo.
ICoronavirus: Izinyathelo Zokuvimbela Emhlanganweni Wabaninimasheya bakwa-Apple
I-Telegram Lite ye-macOS ibuye ibuyekezwe futhi ingeza imisebenzi emisha